Big Impact of COVID-19 on Kidney Patients Using Dialysis | Wire News
Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Big Impact yeCOVID-19 paVarwere Veitsvo Vachishandisa Dialysis
Big Impact yeCOVID-19 paVarwere Veitsvo Vachishandisa Dialysis
National Kidney Foundation (NKF) neAmerican Society of Nephrology (ASN) inosimbisa chinzvimbo chevanhu vane itsvo, vasina immunocompromised, vakatarisana sezvo ichangoburwa Omicron wave iri kuramba ichipararira pakati pevarwere nevashandi munzvimbo dzedialysis. Mhosva dzeCCIDID-19 dziri kukonzera kurwara kwakakomba, kumanikidza kupfupikiswa nguva dzekurapa kuvarwere, uye kuwedzera kushomeka kwevashandi uye zvekushandisa izvo zvinotadzisa kuwaniswa kwekurapa kunopa hupenyu uku. Kukanganisa kweCOVID-19 pavanhu vane zvirwere zveitsvo kwakonzera kudzikira kwekutanga kwehuwandu hwevarwere vari padialysis muUnited States munhoroondo yemakore makumi mashanu yeMedicare ESRD Chirongwa.
Kushaikwa kwevashandi nekushomeka kwezvekushandisa zvakakonzera kuvharwa kwenzvimbo yedialysis uye kumashure mukufambisa varwere pakati pedialysis, zvipatara, uye Skilled Nursing Facilities (SNFs). Kunyangwe kukurumidza kuwana dialysis kumba kunofambisa kufambidzana uye zvichigona kuderedza kunetsa kwekushomeka kwevashandi, iyi inogona kugadziriswa haigadzirise dambudziko rakakura. Chiito chekukurumidza chinodiwa kuti ive nechokwadi chekuti nzvimbo dzedialysis dzinowana zvekushandisa zvinodikanwa nevashandi.
NKF neASN vanokurudzira hurumende, nyika, uye hurumende dzenzvimbo:
• Kupindira kuderedza dambudziko rekupa (semuenzaniso, dialysate concentrates) panzvimbo dzedialysis nekuda kwekushaikwa kweimba yekuchengetera zvinhu uye vashandi verori.
• Govera masiki ekumeso epamusoro-soro, anotenderwa nehurumende kunzvimbo dzedialysis.
• Kumbomira mutemo wazvino uno neCenters for Medicare and Medicaid Services (CMS) unoda kushandiswa kwemajekiseni esaline akaiswa kare, ayo asingawanikwe mune dzimwe nzvimbo, kusvika dambudziko guru rapfuura.
• Kurudzirai hurumende dzematunhu nedzemubatanidzwa kuti dzibvumire kuwirirana kuti vanamukoti vabvumire kuita zvemukati menyika, zvisinei nekuti nyika yakabatana, panguva iyi yakaoma.
Kune vanhu 783,000 muUnited States vane itsvo, uye vashoma pasi pe500,000 vevanhu ava vanoda dialysis inochengetedza hupenyu inounzwa munzvimbo yedialysis katatu pasvondo, maawa mana pazuva. Munguva yekurapa dialysis, varwere vanowanzogara padyo nevamwe varwere uye vashandi muzvivakwa zvisingawanzo kufema zvakanaka. Vazhinji vevarwere ava vakura, vane mari shoma, uye vanobva kunharaunda dzakamboshaya, uye vazhinji vane mamiriro akaita seshuga nezvirwere zvemoyo.
Kunyangwe kuedza kwakabatana nemasangano edialysis, nephrologists, uye vamwe varapi kuti vanonoke kupararira kwayo, COVID-19 inoramba ichimhanya zvakanyanya kuburikidza nenzvimbo dzedialysis. Zvinoenderana nedata kubva kuUS Renal Data System, 15.8% yevarwere vese vari padialysis muUnited States vaive vabatira COVID-19 kusvika pakupera kwa2020. Munguva yechando 2020 wave, kufa kwevhiki nevhiki nekuda kweCCIDID-19 kwakakwira kusvika makumi maviri. % uye kufa kwepagore muna 20 kwaive kwakakwira 2020% kupfuura muna 18
Pasinei nehuwandu hwehutachiwana uye kufa kwevanhu, varwere vedialysis havana kuiswa pamberi pekuwana kubayiwa apo majekiseni akawanikwa gore rapfuura kunyangwe humbowo hunoratidza kuti mhinduro yekudzivirira pakudzivirira yakagomara muvarwere vedialysis. Uyezve, kunyangwe mazinga eantibody achidzikira nekukurumidza muvarwere vedialysis kupfuura muhuwandu hwevanhu, varwere vedialysis havana kuisirwa pamberi neFood and Drug Administration (FDA) kana Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pakabvumidzwa dosi rechitatu rekudzivirira. muna Nyamavhuvhu.2 Pamusoro pezvo, varwere vedialysis vakabviswawo mumapoka akakodzera kuwana prophylactic refu-acting antibody therapy yakanangana nehutachiona hweSARS-CoV-2. Chekupedzisira, National Institutes of Health haina kuwana mari yeCCIDID-19 yekutsvagisa kubatsira vanhu vane chirwere cheitsvo kana kutadza mune chero emapaketi ekuyamura egore rapfuura.
Rimwe dambudziko kusavapo kwemishonga yakakodzera kune vanhu vane itsvo. Ipo marapirwo anoderedza njodzi yeCCIDID-19 ari kubuda, zviratidzo zviripo hazvibatanidzi vanhu vane itsvo nekuti vanhu ava vanowanzo buritswa mumiedzo yekiriniki. Kuita uku hakutenderwi. NKF neASN vanoteterera vagadziri kuti vaone kuti zvigadzirwa izvi zvinosanganisira dosing yevarwere vane itsvo kutadza. Kupfuurirazve, isu tinokurudzira FDA kuti icherechedze kusadzivirirwa kwekudzivirira muvanhu vakabayiwa neitsvo uye kuona kuti marapiro anotenderwa kuburikidza neEmergency Use Authorization (EUA) yevarwere vasina immunocompromised.
Sezvo Biden Administration ichitenga novel COVID-19 therapeutics yekugovera muUnited States, zvakakosha kuti varwere vedialysis nevashandi vakosheswe kuti vawane. Kutadza kukoshesa varwere vedialysis kuti vawane nhomba pakutanga kwedenda iri kwakave nemhedzisiro yakakura pakurapwa muzvipatara nerufu. Hatifanire kubvumira kukanganisa kumwe chete uku kuti kuitike zvakare.
Chekupedzisira, COVID-19 inosanganisirwa nenjodzi yakakura yekukuvara kweitsvo (AKI), kunyangwe muvanhu vane itsvo dzakachengetedzwa, zvichikonzera kurwara kwakakomba uye kunyangwe rufu, uye kazhinji zvinoda dialysis nedzimwe nzira dzekutsiva itsvo. Kakawanda panguva yedenda, uye zvakare, panguva yekuvhiya kwazvino Omicron, zvipatara zvakawanda zvakanetsekana kupa kurapa kunoponesa hupenyu kuvarwere nekuda kwekushomeka kwevashandi vakadzidziswa uye zvekushandisa.
Izvo zvakakosha kuti United States iite zvese musimba rayo kugadzirira kuvhiya kwemangwana muCCIDID-19 kesi uye kudzivirira kufa zvisina basa pakati pevanhu vedu vanotambura zvakanyanya. NKF neASN inomira yakagadzirira kubatana nevagadziri vemitemo uye vanogadzira kuzadzisa chinangwa ichi.
Hitsvo Hosha Dzechokwadi
MuUnited States, vanhu vakuru vane mamiriyoni e37 vanofungidzirwa kuti vane chirwere chetsvo, chinozivikanwawo sechirwere chetsvo chisingaperi (CKD) - uye vanenge 90 muzana havazivi kuti vanacho. 1 muvatatu vakuru muUS vari panjodzi yechirwere cheitsvo. Zvinokonzera njodzi yechirwere cheitsvo zvinosanganisira: chirwere cheshuga, high blood pressure, chirwere chemwoyo, kufutisa, uye nhoroondo yemhuri. Vanhu veBlack/African American, Hispanic/Latino, American Indian/Alaska Native, Asian American, kana Native Hawaiian/Mamwe Marudzi ePacific Islander vari panjodzi yakawedzerwa yekubata chirwere ichi. Vanhu vatema/veAfrica vekuAmerica vanodarika katatu sekuti Vachena vangaite itsvo. Hispanics / Latinos ndeye 3 nguva yakawanda kupfuura vasiri-Hispanics kuti vave nekukundikana kwetsvo.
Vanosvika 785,000 vekuAmerica vane itsvo isingagadzirike uye vanoda dialysis kana kuisirwa itsvo kuti vararame. Vanopfuura 555,000 vevarwere ava vanowana dialysis kuti vatsive kushanda kweitsvo uye 230,000 vanogara nekutaridzirwa. Vanoda kusvika zviuru zana vekuAmerica vari pachirongwa chekumirira kuisirwa itsvo izvozvi. Zvichienderana nekuti murwere anogara kupi, avhareji yekumirira nguva yekuisirwa itsvo inogona kunge iri pamusoro pemakore matatu kusvika manomwe.
Nzvimbo dzekudzora nekudzivirira zvirwere Covid-19 Zvinodhaka Zvokudya uye Drug Administration utano nyika dzakabatana
Muedzo weRopa Nyowani Kufanotaura Kwekutanga Alzheimer's
Gates uye Wellcome Pledge US$300 Mamirioni yeCOVID-19 Mhinduro
Proven Heart Health uye Blood Pressure Benefits ye...
Chirevo chekupfuura kweGVB Board Mutevedzeri wasachigaro Paul...
Vamhanyi vanobva kuRussia neBelarus vakarambidzwa kubva kuBoston...
IGLTA inoumba boka idzva remazano repasi rose revakadzi...
Global kudiwa kweIMEX Frankfurt chiratidzo chakanaka
Nzira itsva yekubhururuka: American Airlines inotsiva ndege...
Vibrator Motor Market Outlook Inovhara Bhizinesi Idzva...
Rock 'n' Roll Hall yeFamer Art Rupe Aigara ...
Aloha Richard Kelley: Zvinosuwisa kune Outrigger, Hawaii ...
New Deal Europe Mafomu Kudyidzana neETOA
Oceania Cruises Nyowani 2024 Kuunganidzwa kweNhando
Mahotera: Mari yekufambisa bhizinesi ichadonha madhora mabhiriyoni makumi maviri ...
Qatar Airways neMalaysia Airlines: Iyo Inotevera itsva ...
Chimiro cheSaudi Arabia chiri Kuve Iyo New Tourism Trend
Chii Chitsva muBahamas muna Kubvumbi
Barbados iri Kuvhura neNew Travel Protocols
Mutsva Mutsva Wekudzivirira Chirwere cheAlzheimer...
Florida inotyisidzira kubvisa Disney World yayo ...
Seattle kuenda kuTahiti nendege itsva isingamire
Zvitsuwa zveComoros inzvimbo itsva yakanaka yeVashanyi mu...
Fraport neTAV vanobhadhara € 1.81 bhiriyoni mubhadharo wepamberi we ...